Ny smartphone ZTE's flagship 5G dia hanomboka amin'ny 25 Febroary: io no Axon 10 Pro | Androidsis
ZTE dia fantatra amin'ny famoahana ny andian-telefaona Blade amin'ny hetsika MWC. Tamin'ny taon-dasa, nanambara ny smartphone Blade V9 ary Blade V9 Vita. Tamin'ny volana lasa, ny Blade V10 dia hita niaraka tamin'ny specs feno tao amin'ny TENAA. Noho izany, tombanana fa ny Blade V10 miaraka amin'ny Blade V10 Vita dia mety havoaka ao amin'ny MWC 2019.
Na izany aza, ny fanambaràn'orinasa lehibe indrindra dia ny telefaona voalohany 5G voalohany. Tsy misy antsipiriany hita amin'ny antsipirian'ny telefaona. Misy ny mety hiaraha-miasa amin'ny chipset Snapdragon 855 ary afaka manohana ny modem X50 LTE anao Fifandraisana 5G.
Tamin'ny faran'ny volana lasa teo, finday avo lenta iray nantsoina hoe ZTE A2020 Pro, dia hita tamin'ny sehatra Geekbench benchmarking. Ny lisitra Geekbench an'ny telefaona dia tsy nanamafy ny fisian'ny Snapdragon 855. Na izany aza, ny fitsapana tokana sy marokoroko dia nitovy tamin'ny namboarin'ny SD855, milaza fa io puce io ihany no afaka mampandeha ilay fitaovana.
Fanasana avy amin'ny ZTE ho an'ny laharana voalohany amin'ny finday avo lenta 5G voalohany
Ny terminal miafina ZTE A2020 Pro dia mety ho ny finday avo lenta manaraka Axon 10 Pro. Ity solon'anarana ity ihany koa dia hita tao amin'ny tahiry ny kaomisiona Eurasian Commission (EEC), izay manondro fa ho any Eropa ilay fitaovana. Misy ny mety hisian'ny telefaona miovaova roa, toy ny a maodely mahazatra tsy misy fanohanana 5G ary ny iray hafa alefa amin'ny fifandraisana 5G.
Mandeha ny resaka fa ho avy ny telefaona 5G voalohany an'ny ZTE, voalohany, any Eropa sy Sina amin'ny tapany voalohan'ny taona 2019. Na izany aza, tsy maintsy miandry am-paharetana sy amin'ny fahatokisana isika amin'ny fananganana ny finday avo lenta hiatrika izay zava-baovao rehetra. tsy voambara mialoha sy vinavina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » ZTE ny finday avo lenta 5G an'ny ZTE hanombohana amin'ny 25 Febroary: io no Axon 10 Pro
Voamarina fa ny Galaxy A50 dia hanana sensor momba ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery